Iiyure zeeNkcazo zeHlabathi | FXCC
Ikhaya / Trading / I zixhobo ze Forex / Iiyure zeeNkcazo zeXesha
Iiyure zeeNkcazo zeeNkcazo
Itafile zeeyure zeeFX zeemarike zilula, zilula ukuzijonga, imephu yokushisa kwemitha, ebonisa ngokukhawuleza kwimihla yokuthengisa, apho iimarike zivulekile kwaye zivaliwe.
Kutheni iiHolo zeeNtengiso sixhobo kubalulekile?
Thatha i-infos ecacileyo nebonakalayo malunga neeyure zokuhweba kwiimarike
Ukuchonga amaxesha oshishino aphezulu kakhulu ngosuku olufanelekileyo kwizicwangciso zakho zokurhweba
Ukuchonga amaxesha aphezulu amathuba okunyuka kwemarike
Gwema ukutshitshiswa kweemarike ezinokubakhokelela ekulahlekelweni okungafunekiyo nokungalindelekanga
Akukho zibalo eziyinkimbinkimbi ezifunekayo ukucacisa xa i-London ivula okanye iNew York ivala, ukubonakala okucacileyo kunika ulwazi. Abathengisi banokuthi bachonge ixesha elifanelekileyo lokuhweba lomhla ofanelekileyo kwizicwangciso zabo zokurhweba, mhlawumbi amaxesha anokuba nokukhululeka kweemarike. Abahwebi banokuphepha ukutshitshiswa kwemarike, njengoko ukuvulwa kweemarike kuvame ukunyamekela ukunyakaza okubalulekileyo oku kunokukhokelela ekulahlekelweni okungadingekile nokungalindelekanga.